Moments nabahlobo-Isiseko segama • Umbuzo kunye neempendulo
"Amaxesha kunye nabahlobo" ngumxholo weQ & A Ilizwi Imagazini. Phakathi kwe1906 ne1916, le mibuzo ilandelayo yabuzwa ngabafundi be Ilizwi kwaye iphendulwe nguMnu Percival. Le mihla ingezantsi ziluqhakamshelwano neePDF apho yonke imibuzo kunye neempendulo ziphinde zaveliswa zingafakwanga. Ukugcina ubunyani bembali, naziphi na iimpazamo zochwephesha zigcinwe kunye nokusetyenziswa kweziphumlisi ezazithandwa ngelo xesha. Cofa kwiimpawu ezigqityiweyo apha ngezantsi ukufikelela iimpendulo kwimibuzo nganye ebhalwe phantsi kwaloo mhla.
Singazixela ukuba yintoni esi besikumzimba wethu wokugqibela?
Ngaba sinokwazi ukuba zingaphi izinto esizalwa ngazo ngaphambili?
Ngaba siyakwazi phakathi kokuvela ngokutsha?
Zithini izimvo zokuphindukuzalwa kwakhona kuka-Adam no-Eva?
Bungakanani ubude bexesha elimiselweyo phakathi kokuphindukuzalwa, ukuba likho ixesha elibekiweyo?
Ngaba siyabutshintsha ubuntu bethu xa sibuyela emhlabeni?
Ngaba umfundisi welosisi uyakholelwa kwizinyanya?
Kutheni kungcono ukuba umzimba uphelelwe emva kokufa endaweni yokuba ungcwatywe?
Ngaba kukho inyaniso kumabali esiwafundayo okanye esiva ngayo, malunga ne-vampires kunye ne-vampirism?
Yisiphi isizathu sokufa ngokukhawuleza kwabantu nokuba bancinci okanye kwindawo ebalulekileyo yobomi, xa kubonakala ukuba iminyaka emininzi yobuncedo nokukhula, engqondweni nangokwenyama, ihamba phambi kwabo?
Ukuba ingalo yesibhakabhaka, umlenze, okanye elinye ilungu lomzimba lingahlanjululwa xa ilungu lomzimba lichitshiweyo, kutheni umzimba we-astral awukwazi ukuvelisa enye ingalo okanye umlenze?
Ngaba i-Theosophist isidlo okanye inyama yokutya?
Iingcambu zityalo zingaluthintela njani ingcamango yengqondo xa izityalo zitsalwa ukuba zifumane ingqalelo?
Yiyiphi intsingiselo ecacileyo yee-elementals zegama, ezisetyenziselwa ezininzi ezinxulumene nama-theosophist kunye nama-occultist?
Kuthetha ntoni "isiseko sabantu"? Ngaba kukho nahluko phakathi kwawo kunye nengqondo engaphantsi?
Ngaba kunokwenzeka ukuba umntu abone kwixesha elizayo?
Ngaba akunakwenzeka ukuba umntu abone ukuvela kwangempela kweziganeko ezidlulileyo kunye neziganeko njengoko ziya kuba kwixesha elizayo ngokucacileyo nangokucacileyo njengoko ebona okwangoku?
Kwenzeka njani ukuba umntu abone ngokucacileyo xa ukubonwa okunjalo kuchasene nawo onke amava ethu?
Ziziphi iziko ezisetyenziswe kwi-clairvoyance, kwaye njani umbono womntu udluliselwa kwizinto ezikufuphi ezisekude nazo ezikude, kunye naziwayo ezibonakalayo ezingabonakaliyo ezingabonakaliyo?
Ingaba umlingo angabheka kwixesha elizayo nanini na xa ethanda, kwaye usebenzisa i-faculty ye-clairvoyant ukwenza loo nto?
Ukuba umlumbi unokugubungela isigqubuthelo kutheni abangaboni bemimoya, ngabanye okanye bazuza ngokubanzi ngolwazi lwabo lweziganeko ezizayo?
Yiyiphi "iso lesithathu" kwaye ingabe i-clairvoyant kunye nomlingo uyayisebenzisa?
Ngubani osebenzisa i-pineal gland, kwaye yintoni into ekusetyenziswa kwayo?
Iso lesithathu okanye i-pineal gland livule njani, kwaye kwenzekani kuloo kuvulwa?
Ngaba kuphosakeleyo ukusebenzisa ingqondo endaweni yezindlela zokwenyama ukuphilisa ukugula ngokomzimba?
Kutheni baninzi abaphilisa ngengqondo xa bengaphilisi, kwaye ukuba abayinto abazimelayo, ngaba izigulane zabo aziyikuzifumana?
Ukuba akuphosakeleyo ukufumana imali yokuphilisa izifo eziphathekayo ngokweenkqubo zengqondo, okanye ukunika "imfundiso yenzululwazi," akunakulunganga na ukuba uthisha wesikolo athole imali yokufundisa abafundi nawaphi na amasebe okufunda?
(Kwileta eya kumhleli, ngo-Matshi 1907 "Amaxesha kunye nabahlobo" ihlaziywa, ilandelwa impendulo evela kuMnu Percival.-Umhl.).
UmKristu uthi umntu unomzimba, umphefumlo nomoya. I-Theosophist ithi uMntu unemigaqo eyisixhenxe. Ngamazwi ambalwa zeziphi iziMiselo eziSisixhenxe?
Ngamazwi ambalwa unganditshela oko kwenzekayo ekufeni?
Uninzi lwamaKristu lubanga ukuba emibonweni yabo imiphefumlo yabashiya ibonakala kwaye ixoxa nabahlobo. I-Theosophist ithi oku akunjalo; ukuba into ebonwayo ayiyiyo umphefumlo kodwa igobolondo, i-spook okanye umzimba onqwenelayo umphefumlo awulahlile. Ngubani ochanekileyo?
Ukuba umphefumlo womntu ungabanjwa entolongweni emva kokufa ngumzimba walo wesifiso, kutheni lo moya ungabonakali kwiimeko kwaye kutheni kungalunganga ukutsho ukuba akubonakali kwaye kuxoxisana nabahleli?
Ukuba ukubonakala kwiimboniselo kuba kuphela iigobols, i-spooks okanye izidumbu zomnqweno, eziye zahluthwa yimiphefumlo yabantu emva kokufa, kutheni ukuze bakwazi ukunxibelelana nabahleli kwiziko elikwaziyo kuphela umntu ochaphazelekayo, kwaye kutheni Ingaba eso sihloko siya kuveliswa ngokuphindaphindiweyo?
Inyaniso ayinakuphikiswa ukuba ngamanye amaxesha iimoya inika inyaniso kwaye inika neengcebiso eziya kulandelwa ziya kubangelwa bonke abachaphazelekayo. Ingaba i-theosophist, okanye nayiphi na into echasene nezinto ezingokomoya, iphika okanye ichaze ezi nkcukacha?
Ukuba kuyinyaniso ukuba akukho nto ngaphandle kweebhokhwe, i-spook kunye neenkampani ezingenayo i-manas ezibonakalayo, ngokwemifundiso ye-theosophika, kwiziganeko, apho ivela khona ulwazi kunye neemfundiso zendalo kunye nengqungquthela ye-theosophiki, okungazange kuqinisekiswe ukuba ezinye iindlovu zamukelwe?
Ngaba umsebenzi ofile ngokwawo okanye ngokuhlangeneyo ukuze ufikelele ekupheleni kwesinye?
Abafileyo badla njani, xa kunjalo? Yintoni egcina ubomi babo?
Ngaba abafileyo banxibe iimpahla?
Ngaba abafileyo bahlala kwizindlu?
Ngaba ubuthongo obufile?
Ngaba kukho umntu owaziyo apho isikhungo sijikeleze khona ilanga neeplanethi zethu zibonakala zihamba? Ndiyifunde ukuba kungenzeka ukuba nguAloneone okanye uSirius.
Iyintoni imbangela yeentlanzi ezinkulu, ezifana nemililo yomlilo kunye nemililo ebonakala ngathi ivela kwimizuzu eyahlukeneyo yesixeko, kunye nantoni na?
Ngaba iimpembelelo zeeplanethi eziqeshwe ukulawula i-karma yabantu, okanye i-future? Ukuba kunjalo, luya kuphi ukuthanda inkululeko?
Kwi "Moments with Friends," yeVol. I-4, iphepha le-189, kuthiwa iKrisimesi lithetha "Ukuzalwa kwelanga elingabonakaliyo lokukhanya, umgaqo kaKristu," othi, njengoko kuqhubeka, "Kufanele kuzalwe kumntu." Ukuba kunjalo, ngaba Ukuzalwa kukaYesu kwakukho nangomhla wamashumi amabini anesihlanu kaDisemba?
Ukuba uYesu okanye uKristu akazange aphile kwaye afundise njengoko kufuneke enze, yintoni na ukuba iphosakelo elinjalo liye lalingisa kwiinkulungwane ezininzi kwaye kufuneka liphumelele namhlanje?
Ngaba iingqondo zezilwanyana kwaye zicinga ntoni?
Ingaba nayiphi na impembelelo embi iya kuziswa ngabantu ngenxa yobomi bezilwanyana zasekhaya?
Ngaba unokuchaza ngokucacileyo ukuba iingcinga ezahlukeneyo zomntu zisebenza njani kumhlaba wezinto ezibonakalayo ukuze zivelise iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ezifana neengonyama, ibhere, ipikoko, i-rattlesnake?(Lo mbuzo ubhekisela kumhleli wePercival Ucinga-Ed.)
Ngaba umntu unokujonga ngaphakathi emzimbeni wakhe aze abone ukusebenza kwezitho ezahlukileyo, kwaye ukuba kunjalo oko kwenzeka njani?
Ziziphi iingongoma ezibalulekileyo ihlabathi le-astral lihluke ngokomoya? La magama aqhelekileyo asetyenziswe ngokungafaniyo kwiincwadi kunye namaphephancwadi abhekisana nalezi zifundo, kwaye oku kusebenziseka ukuphazamisa ingqondo yomfundi.
Ngaba ngalinye iqumrhu lomzimba liqumrhu elinobuchule okanye lenza umsebenzi walo ngokuzenzekelayo?
Ukuba ngalinye iqumrhu okanye inxalenye yomzimba wenyama imele kwingqondo, ngoko kutheni umntu onamahloni alahlekelwa ngumzimba wakhe xa elahlekelwa ukusebenzisa kwengqondo yakhe?
Akubonakali ukuba iingcamango ezimbini okanye ezingaphikisanayo zichanekile malunga nantoni na inyaniso. Kutheni kukho iingcinga ezininzi malunga neengxaki okanye izinto? Siza kuba njani sikwazi ukuxelela ukuba yiyiphi imbono elungileyo nantoni na inyaniso?
Kutheni amatye axabisekileyo abelwe kwiinyanga ezithile zonyaka? Ngaba oku kubangelwa nantoni na enye kunokuba abantu banomdla?
Ngaba idayimane okanye elinye ilitye elixabisekileyo lixabiso ngaphandle kwelo limele umgangatho wemali? kwaye, ukuba kunjalo, ixabiso ledayimane okanye elinye ilitye lincike ntoni?
Ngaba umoya usebenza nomntu kwaye ziphi izinto ezingokomoya?
Fe bruwari 1910:
Ngaba akukho nkolelo yokuba iAtlante ingabaleka? Ukuba kunjalo, kukho inkolelo enjalo?
Ngaba ngabantu abazama ukulungisa ingxaki yokuhamba ngeenqwelo zangasese, aphinde abuyele eAtlanteans?
Ukuba ii-Atlante zazisombulula ingxaki yokuhamba kwendawo, kwaye ukuba abo baxhalabele ingxaki efanayo beAtlanteans, ngoko kutheni aba bantu bengaphinda bahlaziywe ukusuka kwe-Atlantis nangaphambi kwexesha langoku, kwaye ukuba baphinde baphila ngaphambi kokuba uneminyaka yobudala, kutheni abazange bakwazi ukuqonda umoya okanye ukubhabha phambi kwexesha langoku?
Ngaba ubumnyama ukungabikho kokukhanya, okanye ngaba yinto ehlukeneyo ngokwayo kwaye ithatha indawo yokukhanya? Ukuba bahluke kwaye bahluke, yintoni ebumnyama nokukhanya?
Ngaba kunokwenzeka ukuphuhlisa iindidi ezitsha zemifuno, iziqhamo okanye izityalo, ezihluke ngokupheleleyo kunye naziphi na ezinye iintlobo eziyaziwayo? Ukuba kunjalo, kwenzeka njani?
Ngaba kunokwenzeka ukuba ubeke ingcinga ngaphandle kwengqondo? Ukuba kunjalo, yenziwa njani; Umntu angakuthintela njani ukuphinda-phinde kwakhe kwaye angahlali ezingqondweni?
Kutheni inyoka ithathwa ngokungafaniyo ngabantu abahlukileyo? Ngamanye amaxesha inyoka iyathethwa njengommeli wobubi, ngamanye amaxesha njengophawu lobulumko. Kutheni umntu enolwazi olunjalo lwenyoka?
Kwii-ezine kwikota kunye neekota zecangca kwi-Keystone yeMasonic yeRoyal Arch Isahluko iileta ze-HTWSSTKS Ngaba zikhona naziphi na izidibaniso ze-Zodiac, kwaye zithini na izikhundla ezijikeleze isangqa?
Umuntu unokuzikhusela njani kubuxoki okanye ukunyelisa abanye?
Izilwanyana ezihambayo ngokutya zihlala phi ngaphandle kokutya kwaye zibonakala zingenawo umoya ngexesha lexesha elide lobushushu?
Ngaba isilwanyana esinemiphunga singaphila ngaphandle kokuphefumla? Ukuba kunjalo, uhlala njani?
Ingaba inzululwazi iyayiqonda nayiphi na umthetho umntu angaphila ngaphandle kokutya kunye nomoya; ukuba kunjalo, ngaba abantu bahlala njalo, kwaye yintoni umthetho?
Kutheni ixesha likwahlukana nje?
Fe bruwari 1913:
Ngaba umntu angaphila, aphelise imisebenzi, aze afe ubomi obungaphezu kweyodwa ngexesha lakhe elilinganayo leminyaka kulo mhlaba?
Ingaba isiseko semfundo, ngeenkqubo zomlingo, maziziswe kwifom yekhonkrithi ngezandla; ukuba kunjalo, yiyiphi ifomu ekhutshiweyo kwaye yenziwa njani?
Izandla kufuneka zisetyenziswe njani ekuphiliseni umzimba womzimba okanye nayiphi na inxalenye yomzimba?
Yintoni eyimfuneko yokwanda kokuzinikela?
Uhlobo luni lwesibingelelo, kwaye sele lusetyenziswa kangakanani?
Ngaba zikhona izibonelelo ezivela ekutshiseni isiqhumiso, ngexesha lokucamngca?
Ingaba yimiphumo yokutshisa isiqhumiso esibonakalayo kwiyiphi na iindiza?
Ziziphi iindidi, izitye kunye namatye ezibhekisela kwieplanethi ezixhenxe?
Ngaba ukugqithwa kwemibala, izitye kunye namatye ziza kuqwalaselwa ngumgangatho weplanethi ngaphantsi komntu ozalayo?
Ngaba unemibala, isinyithi kunye namatye naziphi na izinto ezikhethekileyo, kwaye zinokugqithiswa njani ngaphandle kweeplanethi?
Ziziphi iileta okanye iinombolo eziqhotyoshelwe okanye ezichazwe kwiiplanethi?
Ngaba kukulungele ukuba indoda ishiye umzimba wayo ingazi, ukuba umphefumlo ungangena kwiqondo layo?
Ngaba imiphefumlo ifikelela phi ubude obashiya imizimba yabo ngokwenyama kwaye bahlala beyazi emva kokufa?
Ngaba umntu uyakuthanda kwaye akayithandi iimpawu zomphefumlo wakhe? Ukuba kunjalo, ziboniswa njani? Ukuba akunjalo, zivelaphi ezi zinto zithandwa kwaye zingathandi?
Ngaba kukulungele ukuba umntu afune ukunyanzela iminqweno yakhe yesondo, kwaye kufuneka azame ukuphila ubomi bokungabikho?
Luphi ulwalamano phakathi kwamagnetism kunye negravitation, kwaye bahluke njani, ukuba kunjalo? Yaye yintoni na ulwalamano phakathi kwamagnetism kunye ne-animal magnetism, kwaye bahluke njani, ukuba kunjalo?
Kuphi unyango olwenziwa yi-animal magnetism?
Iyintoni umqondo wokuvumba; lisebenza njani; ukwenza iinqununu zomzimba zibandakanya ukuveliswa kwemvakalelo, kwaye yiyiphi inxalenye edlalayo yokudlala?
Yintoni i ingcamango? Ungalinywa njani kwaye usetyenziswe?
Yintoni eyasikhuthaza ukuba sitshutshise kwimibono yethu? Singavunyelwa kukuphi na ukuphikisa imibono yethu kwabanye?
Yintoni edla ngokubhekisela kwigama elithi "Umphefumlo" kwaye i-Soul soul ifanele isetyenziswe njani?
Ngaba imfundiso ye-Theosophika yokubandezeleka kwethu emhlabeni njengemali yokubuyisela i-kararmic retribution, ngokubhekiselele kwi-Theological statement yokubandezeleka kwethu njengento yokubuyisela esihogweni, kuzo zonke zombini izibongo kufuneka zamukelwe ngokholo nje; kwaye, ngokubhekiselele, omnye ulungele enye nje ukuvelisa ukuziphatha okuhle?.